ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ | MoeMaKa Burmese News & Media
မင်းကိုနိုင် ● သမီးလည်း ကူညီပါရစေ
12 Responses to ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ
နေမျိ on April 16, 2012 at 4:01 pm
NYEIN CHAN AYE on April 16, 2012 at 9:31 pm
လူမှုရေးကွန်းယက်စာမျက်နှာများတွင် ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု အကြောင်းအရာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ရေးသားမှုများ၊ ဆောင်းပါးများအရ ပြန်လည်ပြောဆို ဆွေးနွေးချင်တဲ့ အချက်များကို မှတ်ချက်အနေနဲ့ ရေးခွင့်ပြုပါ။
အဝတ်အစားဝတ်တာကိုကြည့်ပြီး မိမဆုံးမ၊ ဖမဆုံးမလို့ ကရုဏာ ဒေါသောနဲ့ ပြောသလိုလိုနဲ့ တဘက်စောင်းနင်း ပြောနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း ပြောချင်တယ်။ ဆရာတို့ပြောတဲ့ မိမဆုံးမ၊ ဖမဆုံးမတွေကပဲ စကတ်တိုတွေ၊ ဘောင်းဘီတိုတွေနဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းက ဘုန်းကြီးတွေကို လက်တွဲကာကွယ်ရင်း လမ်းပေါ်မှာ တိုင်းပြည်တာဝန်ကျေခဲ့တာပါ..။ အဲ့ဒီ ဆရာတို့ပြောတဲ့ မိမဆုံးမ၊ ဖမဆုံးမတွေကပဲ နီုင်ငံတာကာမှာ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်တွက အဆင့်မြင့်ဆုံး ဘွဲ့တွေယူ၊ ယောင်္ကျားတွေနဲ့ ယှဉ် အလုပ်လုပ် ဝင်ငွေရှာပြီး၊ တိုင်းပြည် အခွန်ထမ်းနေတာပါ..။
ဗမာပြည် ရာသီဥတုနဲ့ ပြောစတမ်းဆိုရင် ဘောင်းဘီတို၊ စကတ်တို၊ စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်ဝတ်တာ ဘာမှ မကောင်းမြင်စရာ၊ အပြစ်တင်စရာ မရှိဘူး။
Mon on April 18, 2012 at 6:24 pm
AGREE with the article and Nyein Chan Aye as all the facts you pointed out are resonable and correct. There isadifference between being modernized and being charater-spoiled. Wearing skirt is good for doing business and working purposes while Htamin is not eay to move around and have to take care of not getting off while moving around. I don’t mean, however, that we should not wear Htamin at all, for some purposes, Htamin is the most comfortable and elegant. Nowadays, Burmese traditonal Htamin designs are more beautiful and have an extent of variety to choose than decades ago…In my eyes, Burmese Kyogyicheik is the most elegant and precious dress even though there is not much chance to wear it outside Burma….
One more thing, Burmese men and boys also have to change the way they look at the girls who also have the same right to be treated equally. Buddha teaches us that there are only two things which are physical and mental happenings. There is no segregation between men and women, either. Why should we differ??
mankyi on April 16, 2012 at 9:50 pm
ငကြောင် မင်း ညီမကို ဟိုပေါ်ဒီပေါ် ၀တ်ခိုင်းပြီး မင်းနဲ့ငါရဲ့ ရှေ့မှာ ထိုင်ခိုင်း ပြီးတော့ငါက မျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်နေမယ် ဘယ်လိုလဲ မင်းညီမကို မယ်ယဉ်ကျေးလို့ ပြောမလား စမ်းကြည့်ချင်လိုက်တာ။ ဘုရားဟောတာ စိတ်ကို အဓိကဟောတာ အဲဒီစိတ်ဆိုတာလည်း အာရုံကောင်းမကောင်းပေါ် မှာ တည်ပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့ စိတ် ရိုင်းတဲ့ စိတ်ဆိုပြီး ကွဲသွားတာ ။ မင်းဆိုလိုတာက မြင်လိုက်တာနဲ့ တရားစခန်းတွေမှာလို မြင်တယ်လို့ မှတ်ရမှာလား ။ ဘယ်သူမှ မှတ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး ။ နှာဘူးရဲ့။ မင်း တောင် ဆယ်ခါမြင်ရင် ဘယ်နှစ်ခါ တရားမှတ်လိုက်လဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးစမ်းပါ။ လူမမြင်ရဘူးဆိုပြီး လိုင်းပေါ်မှာ သိပ်မရှုပ်နဲ့ကွာ။
clock on April 16, 2012 at 10:18 pm
Overall key points in this article is great and valuable for society in the world but some ideas written by author are dangerous point of view.In Buddhism the question of ‘what is the meaning of culture?’ has exact answer(Proper manners(mental,verbal and physical) can make mind peaceful). Before writing this article like this, author should readalot of books broadly and ask scholar people(i.e monks) in detail.may you be happy and peaceful in your life forever!
Lin on April 16, 2012 at 10:50 pm
That artical is misleading to young people.
The author is going to breach Burmese culture.
Very bad idea and excues.
mrmonn on April 17, 2012 at 6:21 am
The point of view of author is very good . Some commentators have their personal feeling than rational thinking. It is true that we have been under dogmatic system for many decades ,so no wonder we have that pessimistic idea on clothing;modern clothing is impolite for our culture only.
Many people in Burma cannot think what the culture and politeness is.According to some pessimistic way of thinking , I would like to ask you . OK, I will wear our old fashion clothing and can I insult other people ,without any having respect to any other people’ individual right?
Set Htun on April 17, 2012 at 12:21 pm
A good sound in writing ! Hopefully and sincerely to follow yourself what you said.
“God made man and tailor made gentleman” that indicates for decent people.
If we know those girls’ class and character, it is easy to forgive them.
zaw on April 17, 2012 at 8:02 pm
ALL ARE NOT PERFECT, ALWAYS SOMETHING NEED.
(Inacountry, most and more get improvement, low and little more get damaged cases.)
FORGET THEM, WE HAVE TO TRY HARD AND HARD TO GET OUR COUNTRY MYANMAR
TO GET IMPROVEMENT. NOT FAR AWAY WE WILL GET ALL THE BEST.
ပုပု on April 18, 2012 at 2:08 pm
anonymous on April 18, 2012 at 6:06 pm
Why should we try too hard to preserve old fashion?
I agree with writer, cultures are mixing. Fashion is the same. It may be based on western fashion but it is becoming world’s modern fashion. We should and must be following the modern ideas, fashion, culture etc.
Isn’t it more important to be honest(not to steal, not to lie, not to kill etc), hardworking, helpful, motivated and broadminded than wear traditional clothing or talk in traditional way. Anyway, fashion always change.